busy box pro v1.1 - .::just for share::.
Home » android » android apps » android ဖုန်းဆိုင်၇ာ » busy box pro v1.1
busy box pro v1.1
Android Device ဖုန်းကို Root လုပ်ပြီးရင် မြန်မာ Font တွေသွင်းမယ်ဆိုရင် Busybox ကို တောင်းလေ့ရှိပါတယ်။
Busybox ရဲ့ အာနီသင်တွေထဲမှာ Android Device တွေကို ပေါ့ပါးစေတဲ့ အာနီသင်လဲပါပါတယ်။
ယခု BusyBox Pro v11 က Android Device System တွေကို မြန်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ အာနီသင်က9လောက်ရှိပါတယ်။
သုံးကြည့်ပါ။ ထူးခြားမှုကိုခံစားပါ …
Labels: android, android apps, android ဖုန်းဆိုင်၇ာ